ဘယ်က WINDOWS 10 ပိုကောင်းသို့မဟုတ်7ဖြစ်ပါသည်: OPERATING SYSTEM ကိုနှိုင်းယှဉ် - WINDOWS ကို - 2019
Windows ကို 10 သို့မဟုတ် 7: သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာ
Windows operating system ရဲ့အသီးအသီးဗားရှင်းအသစ်ကိုများလွှတ်ပေးရေးခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုများ၏ရှေ့မှောက်၌အသုံးပြုသူကိုထည့်လေ့မရှိ: အဟောင်း, ပြီးသားတစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုစနစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက်သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုပြောင်း။ အများစုကတော့ငြင်းခုံမှုများသည် သာ. ကောင်း၏သော OS ကို၏အစွမ်းအကြားရှိပါတယ် - က Windows 10 သို့မဟုတ် 7, တစ်ဦးချင်းစီ version ကို၎င်း၏အားသာချက်ရှိပါတယ်။ အကြောင်းမူကား,
ဘယ်ဟာပိုကောင်းဖြစ်ပါသည်: မှာ Windows 10, သို့မဟုတ် 7
စားပွဲတင်: 10 Vindovs နှိုင်းယှဉ် 7
အဘယ်အရာကို OS ကတွင်သင်သည်အပြေးနေကြသနည်း
တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှင့် Windows7နဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Windows 10 ကိုအပေါငျးတို့သဗားရှင်းဘုံထဲမှာအများကြီး (ဥပမာ, တူညီတဲ့သည့်စနစ်လိုအပ်ချက်များကို), ဒါပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်အတော်လေးအနည်းငယ်ကွဲပြားမှုတို့တွင်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်သည်။
Windows ကို 10, "ခုနစျ" မကို virtual desktops တွေနဲ့မတူဘဲ
parameter သည် Windows7ကို Windows 10 ကို
အင်တာဖေ့စ Windows ကိုအဆိုပါဂန္ဒီဇိုင်း အသံအတိုးအကျယ်အိုင်ကွန်နှင့်အတူနယူးပါးလွှာဒီဇိုင်း, သငျသညျစံသို့မဟုတ် tiled mode ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
file ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု ဉီးစီး အပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို (Microsoft Office နှင့်အခြားသူများ) နဲ့ Explorer ကို
ရှာဖှေ Explorer ထဲမှာရှာရန်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် "Start ကို" မီနူး အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့် windose စတိုးဆိုင်အသံရှာဖွေမှု (အင်္ဂလိပ်လို) "Cortana" ကို desktop ပေါ်မှာထံမှရှာရန်
Workspace ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု Tool ကို "Snap" မျိုးစုံမော်နီတာများအတွက်ထောက်ခံမှု Virtual Desktop, Snap တစ်ခုတိုးမြှင့်ဗားရှင်း
အသိပေးစာ pop-up windows ကိုနှင့်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်စနစ်ဗန်း အချိန်အထူး "Notification Center" တွင်အသိပေးချက်များကိုတိပ်အမိန့်ထုတ်
ထောက်ပံ့ အကူအညီ "Windows ကိုအကူအညီ" Voice ကိုလက်ထောက် "Cortana"
အသုံးပြုသူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အလုပ်လုပ်တဲ့ limitation မရှိဘဲဒေသခံတစ်ဦးအကောင့်ကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်း တစ်ဦးကို Microsoft account တစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်း (ကမပါဘဲသင်တစ်ဦးကပြက္ခဒိန်, အသံရှာဖွေရေးနှင့်အချို့သောအခြား features တွေမသုံးနိုငျသညျ)
built-in browser ကို က Internet Explorer 8 microsoft Edge
ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး standard Windows Defender ပေါင်းစည်း Anti-virus ကို "Microsoft Security Essentials"
ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်း မြင့်သော မြင့်သော
ထွက်နိုင်ရေး မြင့်သော အမြင့်, ဒါပေမယ့်အဟောင်းနှင့်အားနည်းပစ္စည်းတွေထက်နိမ့်စေခြင်းငှါ
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှင့် tablet နှင့်အတူထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း အဘယ်သူမျှမ ရှိပါတယ်
ဂိမ်းကစားစွမ်းဆောင်ရည်ကို (ကြိုတင် Windows7ကိုမှဖြန့်ချိ) အချို့သောအဟောင်းများဂိမ်းများအတွက် 10 ဗားရှင်းထက်ပိုမိုမြင့်မား မြင့်မားသော။ DirectX12 ၏သစ်တစ်ခုစာကြည့်တိုက်များနှင့်အထူး "ဂိမ်း mode ကို" ရှိပါတယ်
Windows7သည်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတခုသီးခြားအကြောင်းကြားစာဖြင့်လိုက်ပါသွားစဉ်က Windows 10 ခုနှစ်, အားလုံးသတိပေးချက်များ, တစ်ခုတည်းတိပ်သို့စုဝေးနေကြတယ်
အတော်များများကဆော့ဖျဝဲ developer များနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကို Windows ၏အဟောင်းတွေဗားရှင်းများအတွက်ထောက်ခံမှုစွန့်ခွာ။ အရာဗားရှင်းထားရန်ရွေးချယ်တဲ့အခါ - Windows7ကိုသို့မဟုတ် Windows 10, ကသင့်ရဲ့ PC နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများအနေဖြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ဗီဒီယို Watch: Why You Need Microsoft Office 365! (စက်တင်ဘာလ 2019).